Onyankopɔn Tumi: Ade Nyinaa So Tumfoɔ Yehowa Nyankopɔn Tumi So | Bɛn
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Baoule Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niuean Norwegian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
‘Yehowa Tumi So’
1, 2. Ahodwiride bɛn na na Elia ahu wɔ n’asetram, nanso anwonwade bɛn na ohui wɔ Bepɔw Horeb ho ɔbodan ano?
NÁ Elia ahu ahodwiride ahorow pɛn. Ohuu nkwaakwaadabi a wɔde nnuan brɛɛ no mprenu da koro bere a na wakohintaw no. Ohuu sɛnea asikresiam ne ngo a ɛwɔ nhina abien mu ansa da wɔ ɔkɔm a esii bere tenten bi nyinaa mu no. Na mpo ohui sɛ wɔabua ne mpaebɔ ma ogya fi soro aba pɛn. (1 Ahene, ti 17, 18) Nanso, na Elia nhuu biribi a ɛte sɛ eyi pɛn.
2 Bere a na wamoamoa ne ho wɔ ɔbodan bi a ɛwɔ Bepɔw Horeb ho ano no, ohuu anwonwade ahorow a ɛbaa nnidiso nnidiso. Nea edi kan no, mframa bɔe. Ɛbɛyɛ sɛ ɛbɔɔ denneennen yɛɛ dede, efisɛ na ano yɛ den araa ma ɛpaapaee mmepɔw bubuu abotan. Nea edii hɔ ne asasewosow, na ano yɛɛ den araa ma asase paapaee. Afei ogya dii hɔ. Bere a ogya no bɔ faa beae hɔ no, ɛda adi sɛ Elia tee ogya no hyew.—1 Ahene 19:8-12.
‘Hwɛ, Yehowa twaam’
3. Onyankopɔn su bɛn na Elia hui, na ɛhe na yebetumi ahu su koro yi ara?
3 Saa nneɛma yi a Elia hui no nyinaa daa ade biako adi—na ɛyɛ Yehowa Nyankopɔn tumi a ɔda no adi wɔ akwan horow so no. Nokwarem no, enhia sɛ yehu anwonwade bi ansa na yɛahu sɛ Onyankopɔn wɔ saa su yi. Ɛda adi pefee. Bible ka kyerɛ yɛn sɛ adebɔ da Yehowa ‘daa tumi ne ne nyamesu’ adi. (Romafo 1:20) Wo de susuw ɔprannaa mu dede a ano yɛ den ne anyinam a ɛpa gya, aworoeɛ kɛse nsu a efi mmepɔw mu gu fam no fɛ, ewim a nsoromma ahyɛ hɔ ma no kɛse a ɛyɛ nwonwa no, ho hwɛ! So wunhu Onyankopɔn tumi wɔ nneɛma a ɛtete saa mu? Nanso, ɛnnɛ wiase yi mu nnipa kakraa bi na wogye Onyankopɔn tumi tom ankasa. Ɛno mpo no, wɔn mu kakraa bi pɛ na wogye tom wɔ ɔkwan a ɛfata so. Nanso, Onyankopɔn su yi a yɛbɛte ase no ma yenya nneɛma pii a yebegyina so abɛn Yehowa. Wɔ ɔfã yi mu no, yebesua Yehowa tumi a ɛsen biara no ho ade akɔ akyiri.
Yehowa Su a Ɛho Hia
4, 5. (a) Abusuabɔ bɛn na ɛwɔ Yehowa din ne ne kɛseyɛ, anaa ne tumi ntam? (b) Dɛn nti na ɛfata sɛ Yehowa paw nantwi de yɛɛ ne tumi ho sɛnkyerɛnne?
4 Yehowa tumi da nsow. Yeremia 10:6 ka sɛ: “Obiara nni hɔ a ɔte sɛ wo, [Yehowa, NW]; wo na woyɛ kɛse, na wo din nso sõ, mmaninyɛ mu.” Hyɛ no nsow sɛ wɔde mmaninyɛ, anaa tumi, abata Yehowa din ho. Kae sɛ, edin yi kyerɛ “Nea Ɔma Ɛyɛ Hɔ.” Dɛn na ɛma Yehowa tumi bɔ biribiara a ɔpɛ sɛ ɔbɔ na ɔma biribiara a ɔpaw sɛ ɔbɛyɛ no yɛ hɔ? Ade biako ne tumi. Yiw, tumi a Yehowa wɔ a ɔde yɛ ade, tumi a ɔde yɛ n’apɛde no, nni ano. Tumi a ɛte saa no yɛ ne su ahorow a ɛho hia no biako.
5 Esiane sɛ yentumi nte Yehowa tumi no nyinaa ase nwie da nti, ɔyɛ mfatoho ahorow de boa yɛn. Sɛnea yɛahu no, ɔde nantwi gyina hɔ ma ne tumi. (Hesekiel 1:4-10) Saa mfatoho no fata, efisɛ nantwi a wɔyɛn no wɔ fie mpo yɛ aboa a ɔsõ na ne ho yɛ den. Ná nkurɔfo a wɔte Bible mmere mu wɔ Palestina no ntaa nhyia aboa bi a ne ho yɛ den sen nantwi. Nanso, na wonim nantwi bi a na ne ho yɛ hu—wuram nantwi bi, anaa okoo, a wɔn ase atɔre no. (Hiob 39:9-12) Roma Ɔhempɔn Julius Caesar kae bere bi sɛ okoo yi akɛse ne asono reyɛ ayɛ pɛ. Ɔkyerɛwee sɛ: “Wɔwɔ ahoɔden kɛse, na wotu mmirika yiye.” Hwɛ sɛnea sɛ wugyina aboa a ɔte saa anim a wobɛte nka sɛ wusua na woyɛ mmerɛw koraa!
6. Dɛn nti na Yehowa nkutoo na wɔfrɛ no “ade nyinaa so tumfoɔ”?
6 Saa ara na sɛ wɔde onipa toto Yehowa, Onyankopɔn, tumfoɔ no ho a, onipa ba fam na onni tumi koraa. Wɔ Yehowa fam no, aman akɛse no mpo te sɛ nsenia mu mfutumawa. (Yesaia 40:15) Esiane sɛ Yehowa nte sɛ abɔde biara nti, ɔwɔ tumi a enni ano, efisɛ ɔno nkutoo na wɔfrɛ no “Ade Nyinaa so Tumfoɔ.” * (Adiyisɛm 15:3) Yehowa ‘tumi so’ na ɔwɔ ‘ahoɔden kɛse.’ (Yesaia 40:26) Ne tumi dɔɔso na ɛnsa da. Onnya n’ahoɔden mfi baabi foforo, efisɛ ‘tumi yɛ Onyankopɔn dea.’ (Dwom 62:11) Nanso, ɔkwan bɛn so na Yehowa de ne tumi di dwuma?
Sɛnea Yehowa De Ne Tumi Yɛ Adwuma
7. Dɛn ne Yehowa honhom kronkron, na dɛn na mfitiase kasa mu nsɛm a wɔde dii dwuma wɔ Bible mu no kyerɛ?
7 Honhom kronkron a Yehowa hwie gu nnipa so no nni ano. Ɛyɛ Onyankopɔn tumi a ɔde yɛ adwuma. Nokwarem no, Bible frɛ no Onyankopɔn “adeyɛ tumi” (NW) wɔ Genesis 1:2. Wobetumi akyerɛ mfitiase Hebri ne Hela nsɛmfua a wɔkyerɛ ase “honhom” no ase wɔ ɔkwan foforo so sɛ “mframa,” “ahome,” ne “ahum.” Sɛnea nsɛm asekyerɛ nhoma akyerɛwfo kyerɛ no, mfitiase kasa no mu nsɛmfua a wɔde dii dwuma no kyerɛ tumi bi a ɛreyɛ adwuma a aniwa nhu. Te sɛ mframa no, yɛmfa yɛn aniwa nhu Onyankopɔn honhom, nanso yetumi hu nneɛma a ɛyɛ no ankasa.
8. Wɔ Bible mu no, wɔfrɛ Onyankopɔn honhom no dɛn wɔ sɛnkyerɛnne kwan so, na dɛn nti na saa ntotoho yi fata?
8 Onyankopɔn honhom kronkron no yɛ nneɛma pii a enni ano. Yehowa betumi de adi atirimpɔw biara a ɛwɔ n’adwenem ho dwuma. Enti ɛfata sɛ, wɔ Bible mu no, wɔfrɛ Onyankopɔn honhom no wɔ sɛnkyerɛnne kwan so sɛ ne “nsateaa,” ne “nsa a ɛyɛ den,” anaa ne “basa a wateɛ mu.” (Luka 11:20; Deuteronomium 5:15; Dwom 8:3) Sɛnea onipa de ne nsa betumi ayɛ nnwuma pii a egye ahoɔden anaa ahokokwaw pii no, saa ara na Onyankopɔn betumi de ne honhom adi atirimpɔw biara ho dwuma—te sɛ atɔm ketewaa a ɔbɔe anaa Ɛpo Kɔkɔɔ no mu a ɔpaee anaa kasa foforo a ɔmaa afeha a edi kan no mu Kristofo tumi kae no.
9. Yehowa tumi a ɔde di ade no kɔ akyiri dɛn?
9 Yehowa nam tumi a ɔwɔ sɛ Amansan Hene no nso so de ne tumi yɛ adwuma. So wubetumi ayɛ mfonini wɔ w’adwenem sɛ wowɔ nkoa ɔpepepem pii a wonim nyansa a wɔayɛ krado sɛ wɔbɛyɛ nea woka biara? Yehowa wɔ tumi a ɛte saa a ɔde di ade. Ɔwɔ asomfo a wɔyɛ nnipa, na wɔtaa de wɔn toto asraafo ho wɔ Kyerɛwnsɛm mu. (Dwom 68:11; 110:3) Nanso, sɛ wode ɔbɔfo toto onipa ho a, onipa yɛ abɔde a ɔyɛ mmerɛw. Hwɛ, bere a Asiria asraafo kɔtow hyɛɛ Onyankopɔn nkurɔfo so no, ɔbɔfo biako kunkum saa asraafo no mu 185,000 anadwo biako! (2 Ahene 19:35) Onyankopɔn abɔfo yɛ “tumi abran.”—Dwom 103:19, 20.
10. (a) Dɛn nti na wɔfrɛ Ade Nyinaa so Tumfoɔ no asafo Yehowa? (b) Hena na ɔyɛ Yehowa abɔde nyinaa mu tumfoɔ?
10 Abɔfo dodow ahe na wɔwɔ hɔ? Odiyifo Daniel nyaa ɔsoro anisoadehu bi ma ohuu ahonhom abɔde bɛboro ɔpepem 100 sɛ wogyinagyina Yehowa ahengua anim, nanso biribiara nni hɔ a ɛkyerɛ sɛ ohuu Yehowa abɔfo nyinaa. (Daniel 7:10) Enti ebetumi aba sɛ abɔfo ɔpepehaha pii na wɔwɔ hɔ. Enti wɔfrɛ Onyankopɔn asafo Yehowa. Saa abodin yi kyerɛ ne dibea a tumi wom a ɔwɔ sɛ abɔfo asafo kɛse a wɔahyehyɛ a wɔwɔ tumi no Sahene. Ɔde n’ankasa Ba, “abɔde nyinaa abakan,” a ɔsen honhom abɔde yi nyinaa no asi wɔn so panyin. (Kolosefo 1:15) Sɛ́ ɔbɔfo panyin—abɔfo, serafim, ne kerubim nyinaa so panyin—no, Yesu ne Yehowa abɔde nyinaa mu tumfoɔ.
11, 12. (a) Akwan bɛn so na Onyankopɔn asɛm yɛ adwuma? (b) Ɔkwan bɛn so na Yesu dii sɛnea Yehowa tumi kɔ akyiri no ho adanse?
11 Yehowa wɔ ɔkwan foforo a ɔnam so de ne tumi yɛ adwuma. Hebrifo 4:12 ka sɛ: “Onyankopɔn asɛm wɔ nkwa, na ahoɔden wɔ mu.” So woahu Onyankopɔn asɛm mu tumi a ɛyɛ nwonwa no, anaa nkrasɛm a efi honhom mu a mprempren wɔakora so wɔ Bible mu no? Ebetumi ahyɛ yɛn den, ama yɛn gyidi ayɛ kɛse, na aboa yɛn ma yɛayɛ nsakrae a ɛkɔ akyiri wɔ yɛn ankasa mu. Ɔsomafo Paulo bɔɔ mfɛfo gyidifo kɔkɔ wɔ wɔn a wɔde wɔn ho hyɛ ɔbrasɛe mu no ho. Afei ɔde kaa ho sɛ: “Sɛnea anka mo mu bi te ne no.” (1 Korintofo 6:9-11) Yiw, “Onyankopɔn asɛm” mu tumi yɛɛ wɔn ho adwuma, na ɛboaa wɔn ma wɔsakrae.
12 Yehowa tumi yɛ kɛse, na ɔkwan a ɔfa so de yɛ adwuma no tu mpɔn araa ma biribiara nni hɔ a ebetumi asiw no kwan. Yesu kae sɛ: “Onyankopɔn fam de, ade nyinaa betumi ayɛ.” (Mateo 19:26) Atirimpɔw ahorow bɛn na Yehowa de ne tumi yɛ ho adwuma?
Tumi a Ɛwɔ Atirimpɔw
13, 14. (a) Dɛn nti na yebetumi aka sɛ Yehowa nyɛ tumi fibea a onni nipasu? (b) Akwan bɛn so na Yehowa de ne tumi di dwuma?
13 Yehowa honhom no yɛ ade a ɛsen honam fam tumi biara; na Yehowa nyɛ tumi a enni nipasu, na ɔnyɛ tumi fibea ara kwa. Ɔyɛ Onyankopɔn a ɔwɔ nipasu na odi ne tumi so koraa. Ɛnde, dɛn na ɛka no ma ɔde ne tumi yɛ adwuma?
14 Sɛnea yebehu no, Onyankopɔn de ne tumi bɔ ade, sɛe ade, bɔ ade ho ban, siesie ade—ne tiaatwa mu no, ɔde yɛ biribiara a ɛne n’atirimpɔw ahorow a ɛyɛ pɛ no hyia. (Yesaia 46:10) Wɔ nsɛm bi mu no, Yehowa de ne tumi yɛ adwuma de da ne nipasu ne ne gyinapɛn ahorow ho nneɛma bi a ehia adi. Nea ɛsen ne nyinaa no, ɔde ne tumi no yɛ n’apɛde—ɔnam Mesia Ahenni no so bɛsan ne tumidi ho na watew ne din kronkron no ho. Biribiara nni hɔ a ebetumi asiw saa atirimpɔw no kwan.
15. Atirimpɔw bɛn na Yehowa de ne tumi di ho dwuma wɔ n’asomfo ho, na ɔkwan bɛn so na ɔdaa eyi adi wɔ Elia asɛm no mu?
15 Yehowa de ne tumi no di dwuma de boa ankorankoro nso. Hyɛ nea 2 Beresosɛm 16:9 ka yi nsow: “[Yehowa, NW] de n’aniwa kyini fa asase nyinaa so, sɛ ɔde ne denyɛ bedi ama wɔn a wɔn koma di mu wɔ ne ho no.” Elia suahu a yɛkaa ho asɛm mfiase no yɛ ho nhwɛso. Dɛn nti na Yehowa de ɔsoro tumi yɛɛ saa anwonwade no kyerɛɛ no? Wiɛ, na Ɔhemmaa Isebel ɔbɔnefo no aka ntam sɛ obekum Elia. Ná odiyifo no reguan apere ne nkwa. Ɔtee nka sɛ wayɛ ankonam, ehu kaa no, na n’abam bui—ɛyɛɛ no sɛnea adwumaden a na wayɛ no nyinaa ayɛ kwa. Nea ɛbɛyɛ na Yehowa akyekye ɔbarima a na wahaw yi werɛ no, Onyankopɔn daa ne tumi adi kyerɛɛ Elia pefee de kaee no. Mframa, asasewosow, ne ogya no maa Elia hui sɛ Nea ɔwɔ tumi sen biara wɔ amansan yi mu no ka ne ho wɔ hɔ. Bere a na ade nyinaa so tumfoɔ Nyankopɔn wɔ n’afã no, dɛn na na ɛsɛ sɛ osuro wɔ Isebel ho?—1 Ahene 19:1-12. *
16. Dɛn nti na sɛ yesusuw Yehowa tumi kɛse no ho a ebetumi ama yɛanya awerɛkyekye?
16 Ɛwom sɛ ɛnnɛ nyɛ bere a Yehowa yɛ anwonwade ahorow de, nanso efi Elia bere so no, ɔnsakrae. (1 Korintofo 13:8) Ɛnnɛ, ɔda so wɔ ɔpɛ sɛ ɔde ne tumi bedi dwuma ama wɔn a wɔdɔ no no. Ɛwom sɛ ɔte ahonhom atrae a ɛkorɔn de, nanso ɔne yɛn ntam kwan nware. Ne tumi nni ano, enti kwantenten nyɛ no akwanside. Mmom no, “[Yehowa, NW] bɛn wɔn a wɔfrɛ no nyinaa.” (Dwom 145:18) Bere bi a odiyifo Daniel frɛɛ Yehowa hwehwɛɛ ne mmoa no, ɔbɔfo bi begyinaa n’anim ansa mpo na ɔrewie mpaebɔ no! (Daniel 9:20-23) Sɛ Yehowa reboa wɔn a ɔdɔ wɔn na wahyɛ wɔn den a, biribiara nni hɔ a ebetumi asiw no kwan.—Dwom 118:6.
So Onyankopɔn Tumi Ma Ɔyɛ Obi a Wontumi Mmɛn No?
17. Ɔkwan bɛn so na tumi a Yehowa wɔ no ma yesuro no, nanso osuro bɛn na ɛnhyɛ ho nkuran?
17 So ɛsɛ sɛ Onyankopɔn tumi no ma yesuro no? Mmuae no yɛ yiw ne dabi. Yiw, kyerɛ sɛ, saa su yi ma yenya nea yebegyina so anya ne ho suro pa, nidi ne obu kɛse a yesusuw ho kakra wɔ ti a edi eyi anim mu no. Bible ka kyerɛ yɛn sɛ, osuro a ɛte saa no yɛ “nyansa mfiase.” (Dwom 111:10) Nanso, yebua dabi nso de kyerɛ sɛ, Onyankopɔn suro mma yennya biribi nnyina so nnya ne ho suro bɔne anaasɛ ɛmma yɛntwe yɛn ho mfi ne ho.
18. (a) Dɛn nti na nkurɔfo pii nnye nnipa a wɔwɔ tumi nni? (b) Yɛyɛ dɛn hu sɛ tumi a Yehowa wɔ no ntumi nsɛe no?
18 “Tumi ma onipa sɛe; na tumi a obi ne obiara mmɔ mu hye sɛe onipa koraa.” Saa na Engiresini okunini Lord Acton kyerɛwee wɔ afe 1887 mu. Wɔatĩ ne nsɛm no mu aka mpɛn pii, ebia esiane sɛ nnipa pii hu sɛ ɛyɛ nokwasɛm nti. Nnipa a wɔnyɛ pɛ taa de tumi di dwuma ɔkwammɔne so, sɛnea abakɔsɛm ada no adi mpɛn pii no. (Ɔsɛnkafo 4:1; 8:9) Esiane eyi nti, nnipa pii nnye nnipa a wɔwɔ tumi nni na wɔtwe wɔn ho fi wɔn ho. Yehowa wɔ tumi a ɔne obiara mmɔ mu hye. So asɛe no ɔkwan bi so? Dabida! Sɛnea yɛahu no, ɔyɛ kronkron, ɔrentumi nsɛe da. Yehowa nte sɛ wiase a aporɔw yi mu mmarima ne mmea a wɔnyɛ pɛ a wɔwɔ tumi no. Ɔmfaa ne tumi nnii dwuma ɔkwammɔne so da, na ɔrenyɛ saa da.
19, 20. (a) Su afoforo bɛn na Yehowa de ne tumi di dwuma ma ɛne no hyia bere nyinaa, na dɛn nti na eyi yɛ awerɛkyekye? (b) Ɔkwan bɛn so na wobɛkyerɛkyerɛ Yehowa ahosodi mu, na dɛn nti na w’ani gye ho?
19 Kae sɛ, ɛnyɛ tumi nkutoo ne Yehowa su. Yennya nsuaa n’atɛntrenee, ne nyansa, ne ne dɔ ho ade. Nanso ɛnsɛ sɛ yesusuw sɛ Yehowa da ne su ahorow no adi kɛkɛ wɔ ɔkwan a ɛyɛ katee so, te sɛ nea ɔde ne su biako pɛ na edi dwuma wɔ bere bi mu. Nea ɛnte saa koraa no, yebehu wɔ ti ahorow a edi hɔ no mu sɛ Yehowa de ne tumi di dwuma ma ɛne n’atɛntrenee, ne nyansa, ne ne dɔ hyia bere nyinaa. Susuw su foforo a Onyankopɔn wɔ, nea wiase sodifo ntaa nna no adi koraa—ahosodi—ho hwɛ.
20 Fa no sɛ woahyia ɔbarima bi a ɔsõ ware na ɔwɔ tumi ma enti wusuro no. Nanso, bere bi akyi no, wuhu sɛ ɛte sɛ nea odwo. Wayɛ krado na n’ani gye ho bere nyinaa sɛ ɔde ne tumi bɛboa nkurɔfo na wabɔ wɔn ho ban, titiriw, nnipa a wonni ahobammɔ na wɔyɛ mmerɛw no. Ɔmfa n’ahoɔden nni dwuma ɔkwammɔne so da. Wuhu sɛ nkurɔfo di ne ho nseku bere a ɔnyɛɛ wɔn hwee, nanso ɔyɛ n’ade komm, wɔ nidi mu, na ɔda ayamye mpo adi. Ɛyɛ a wudwen ho sɛ ebia w’ankasa wubetumi ada odwo ne ahosodi a ɛte saa ara adi anaa, titiriw, sɛ anka wowɔ ahoɔden saa a! Sɛ wubehu ɔbarima a ɔte saa no a, so wumfi ase mmɛn no? Yɛwɔ nneɛma pii a ɛsen saa a yebetumi agyina so abɛn ade nyinaa so tumfoɔ Yehowa. Susuw asɛm a wogyinaa so paw saa ti yi asɛmti no nyinaa ho hwɛ: ‘Yehowa bo kyɛ fuw, na ne tumi sõ.’ (Nahum 1:3) Yehowa mpere ne ho mfa ne tumi nko ntia abɔnefo mpo. Odwo na ne yam ye. Wada ne ho adi sɛ ne “bo kyɛ fuw” wɔ ahiyi pii mpo mu.—Dwom 78:37-41.
21. Dɛn nti na Yehowa nhyɛ nkurɔfo mma wɔnyɛ n’apɛde, na ne ho asɛm bɛn na eyi ka kyerɛ yɛn?
21 Susuw Yehowa ahosodi wɔ ɔkwan foforo so ho hwɛ. Sɛ wowɔ tumi a enni ano a, so wususuw sɛ ɛtɔ mmere bi a anka wobɛhyɛ nkurɔfo ma wɔayɛ wɔn ade sɛnea wopɛ? Tumi a Yehowa wɔ nyinaa akyi no, ɔnhyɛ nnipa sɛ wɔnsom no. Ɛwom mpo sɛ Onyankopɔn som nkutoo na ɛbɛma yɛanya daa nkwa de, nanso Yehowa nhyɛ yɛn sɛ yɛnsom no. Mmom no, ofi ayamye mu di obiara ni sɛ omfi ne pɛ mu mpaw nea ɔpɛ. Ɔde nea ebefi gyinaesi ahorow a nyansa nnim mu aba ho kɔkɔbɔ ma, na ɔkyerɛ akatua a ebefi gyinaesi pa mu aba no. Nanso gyinaesi no ankasa de, ogyaw ma yɛn. (Deuteronomium 30:19, 20) Yehowa ani nnye ɔsom a efi ɔhyɛ mu anaa ɔsom a ne tumi kɛse no ho hu nti na wɔde ma no no ho ankasa. Ɔhwehwɛ wɔn a wobefi ɔpɛ ne ɔdɔ mu asom no no.—2 Korintofo 9:7.
22, 23. (a) Dɛn na ɛkyerɛ sɛ Yehowa ani gye ho sɛ ɔbɛma afoforo tumi? (b) Dɛn na yebesusuw ho wɔ ti a edi hɔ no mu?
22 Ma yɛnhwɛ ade a etwa to a enti ɛnsɛ sɛ yenya Ade Nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn ho suro a ɛmfata no. Nnipa a wɔwɔ tumi suro sɛ wɔne afoforo bɛkyɛ tumi no. Nanso, Yehowa ani gye ho sɛ ɔbɛma n’asomfo anokwafo tumi. Ɔma afoforo te sɛ ne Ba no tumi kɛse. (Mateo 28:18) Yehowa ma n’asomfo tumi wɔ ɔkwan foforo so nso. Bible kyerɛkyerɛ mu sɛ: “Wo [Yehowa, NW] na kɛseyɛ ne mmaninyɛ ne anuonyam ne nimdi ne aseda wɔ wo, na nea ɛwɔ ɔsoro ne asase so nyinaa wɔ wo. . . . Wo nsam na ahoɔden ne mmaninyɛ wɔ, na nnipa nyinaa kɛseyɛ ne denhyɛ wɔ wo nsam.”—1 Beresosɛm 29:11, 12.
23 Yiw, Yehowa ani begye ho sɛ ɔbɛhyɛ wo den. Ɔma wɔn a wɔpɛ sɛ wɔsom no no mpo “tumi a ɛboro so.” (2 Korintofo 4:7) So w’ani nnye ho sɛ wobɛbɛn Onyankopɔn a ɔwɔ ahoɔden a ɔde ne tumi di dwuma wɔ ayamye mu ne akwan a ɛwɔ nnyinaso so saa yi no? Wɔ ti a edi hɔ no mu no, yebesusuw sɛnea Yehowa de ne tumi di dwuma de bɔ ade no ho.
^ nky. 6 Nea Hela asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “Ade Nyinaa so Tumfoɔ” no kyerɛ ankasa ne “Ade Nyinaa Sodifo; Nea Ɔwɔ Ade Nyinaa so Tumi.”
^ nky. 15 Bible no ka sɛ ‘ɛnyɛ mframa, asasewosow, ne ogya no mu na na Yehowa wɔ.’ Esiane sɛ Yehowa asomfo nte sɛ atoro anyame asomfo nti, wɔnhwehwɛ no wɔ tumi a ɛwɔ abɔde mu no mu. Ɔyɛ kɛse koraa sɛ ɔbɛtra biribiara a wabɔ mu.—1 Ahene 8:27.
2 Beresosɛm 16:7-13 Ɔkwan bɛn so na Ɔhene Asa nhwɛso no da aniberesɛm a ɛwɔ obi ho a ɔmfa nto Yehowa tumi so no mu?
Dwom 89:6-18 Nkɛntɛnso bɛn na Yehowa tumi wɔ wɔ n’asomfo so?
Yesaia 40:10-31 Ɔkwan bɛn so na wɔakyerɛkyerɛ Yehowa tumi mu wɔ ha, ɔkwan bɛn so na ɛkɔ akyiri, na ɔkwan bɛn so na yebetumi anya so mfaso sɛ ankorankoro?
Adiyisɛm 11:16-18 Dɛn na Yehowa hyɛ bɔ sɛ ɔde ne tumi bɛyɛ daakye, na dɛn nti na eyi yɛ awerɛkyekye ma nokware Kristofo?